पाइल्स रोगी हुनुहुन्छ? मुलाको प्रयोग गर्नुस् एक महिनामै पाइल्स चट – Rastriyapatrika
पाइल्स रोगी हुनुहुन्छ? मुलाको प्रयोग गर्नुस् एक महिनामै पाइल्स चट
मुला खाँदा हुने फाइदाबारेमा तपाईलाई थाहा नै होला । तर, के तपाईलाई थाहा छ ? पाइल्स रोकथाममा पनि मुलाभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छैन ?
तपाई मुलाको प्रयोग संक्रमित स्थानमा जलन शान्त पार्न लगाउन पनि सक्नु हुन्छ । अहिले त बजारमा मुलाको पाउडर पनि सहजै पाइन्छ । तपाई चाहनु हुन्छ भने यो पाउडरको प्रयोग पनि गर्न सक्नु हुनेछ ।पाइल्स एउटा यस्तो रोग हो, जसमा शरीरका विशेष हिस्सामा हरेक समय पीडा र जलन महशुस हुने गर्दछ । पाइल्सका रोगीका साथ सबैभन्दा ठुलो समस्या यस विषयमा डाक्टरलाई बताउनु हो । तर, यो गलत हो । डाक्टरसँग सल्लाह लिएर यसको उपचार गर्नु आवश्यक छ। औषधिका साथसाथ घरेलु उपायबाट पनि केही दिनमा तपाई यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्नु हुन्छ ।